आजदेखि सूर्य धनु राशीमा, थाहा पाउनुस् तपाइको राशीमा के प्रभाव पर्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
आजदेखि सूर्य धनु राशीमा, थाहा पाउनुस् तपाइको राशीमा के प्रभाव पर्छ ?
याे पनि पढ्नुस भदौ १ तपाइँका लागि कस्तो ? हेर्नुस् राशिफल
मीनः सूर्य तपाईको राशीबाट दशौं भावमा भ्रमण गर्ने भएकोले मिश्रित परिणाम दिने छ । व्यापार व्यवसायमा स्वप्रयत्नहरुबाट लाभको योग छ । नौकरीपेशामा पनि लाभ पाउन सक्षम हुनुहुने छ । प्रमोशन पनि हुन सक्छ । तर स्वास्थ्यको दृष्टिले सावधानी राख्नु जरुरी छ । वेभदुनियाबाट अनुदित
ट्याग्स: Dainik rasifal